Ukukhipha Imithombo Yezokuxhumana Yezamabhizinisi
Okugcizelela: Imithombo Yezokuxhumana Engaphandle Yenziwe Kahle
ULwesihlanu, May 27, 2016 Douglas Karr
Ukuzibandakanya kwezokuxhumana komphakathi kungaba ngumsebenzi osabisayo enkampanini encane. Ngenkathi ngisebenza ngokubuka komkhiqizo wami uqobo, ngokwethembeka asizinikelanga isu eliqinile nezinsizakusebenza kubukhona bethu bezindaba zenhlalo. Lokho kuyashintsha njenganamuhla, kepha, njengoba sikhuphuka sisebenzisa Ukugcizelela ukukhulisa okulandelayo kwe-ejensi yethu.
Sizamile ukukhishwa kwemithombo yezokuxhumana ukuze sithuthukise izingxoxo zethu ku-inthanethi, kepha ngobuqotho akukaze kuhambe kahle. Sasivame ukuthola izibuyekezo ezimbi, ukunqwabelana kokuqukethwe okungalungile, kanye nomnikelo ophelele wobudlabha. Ukunikezwa kuka-Emphatic, bar none, okungcono kakhulu esikubonile kuze kube manje. Yize kungesilo isu lokuxhumana eliphelele, insizakalo igxile ezinhlosweni zakho zizonke. Ufuna ukudala ukuqwashisa nobani (amathemba, abagqugquzeli, amaklayenti), futhi ufuna benzeni?
Isevisi yehlela ezinyathelweni ezintathu ezilula ezilandelayo:
Yakha iphrofayili - Yabelana ngolwazi oluyisisekelo no Ukugcizelela futhi bazokwakha iphrofayili yokuqukethwe ehlukile yomkhiqizo wakho.
Thola izibuyekezo zakho - Ababhali base-US bazokwakha futhi bathumele kuwe okuqukethwe kwezokuxhumana okumangazayo masonto onke.
Buyekeza nohlelo - Buyekeza izibuyekezo bese Ukugcizelela sizokuthumela kumanethiwekhi akho.
Imininingwane ethunyelwe ukushuna isu lakho lokuqukethwe iphelele. Ukuqala ngencazelo yenkampani yakho nekhasimende elifanele, ungeza onke ama-akhawunti wakho wokuxhumana nomphakathi, engeza ama-akhawunti aqondisiwe wamakhasimende, abathonya, noma oxhumana nabo, ulungise ukuthi kungakanani okuqukethwe kwangaphandle noma okuqukethwe kwangaphakathi ofisa ukuwabelana ngakho, hlinzeka ngezinsizakusebenza eziphezulu ezingangezwa kumxube, nezihloko ogxile kuzo. Ungakwazi nokusetha ithoni yakho - noma ngabe akuhlelekile noma ihlelekile.
Uma uyi-ejensi, ungakha amaphrofayli amaklayenti amaningi, ukhethe uhlelo oluningi, bese ushuna okuqukethwe yikhasimende ngalinye bese wabela imvamisa yezibuyekezo.
Zama i-Emphatic Mahhala!
Lokhu Akukona Ukusetha Futhi Ukhohlwe
Khumbula ukuthi lokhu kukusiza nje ukuthola, ukuhlanganisa, nokuxhuma usebenzisa i-akhawunti yakho yezokuxhumana. Abasebenzi ku-ejensi yethu basabelana ngezibuyekezo ngeziteshi zethu zenkampani, babelana ngezibuyekezo mayelana namakhasimende ethu nempumelelo yabo, futhi siqapha imithombo yezokuxhumana ukuphendula noma iziphi izicelo. Ithuluzi elifana ne- Ukugcizelela akuhloselwe ukufaka esikhundleni lonke isu lakho lemidiya yokuxhumana nabantu; ilapho ukuyengeza khona.
Ukudalula: Sisebenzisa ikhodi yethu yokwenyusa yomuntu siqu ye Ukugcizelela, okufaka i-akhawunti yethu uma ubhalisa.
Tags: okugcizelelayooutsource kwezenhlaloukukhipha imithombo yezokuxhumanaizibuyekezo zokuxhumana ezithunyelwa ngaphandleukukhishwa kwezokuxhumana
Yabelana Ngezincwadi Zakho Zokukhangisa eziyizintandokazi ngokuzwakalayo